Teknolojia - Tsarabika
Misy entana 15 isa.
Fitaovana fanadiovana ny "clavier ordinateur" mandeha amin'ny "port USB" ary mitroka ireo vovoka manelongelina ampin'ny fampiasana ordinatera. Misy borosy kely ihany koa miaraka aminy mba hanadiovana ireo izay loto sarotra alàna.
Vata fandraisam-peo tena tsara marika "Panasonic" misy ireo zavatra rehetra ilaina momba ny feo. Mahazo radio, mamaky "Cd/Mp3" mamaky "USB" ary efa misy "Subwoofer" miaraka aminy.
housse tablette 7"
Fiarovana ny fitaovana toy ny "Tablette" mba tsy ho mora kika, na mianjera. Efa misy "clavier" ihany koa miaraka aminy, mba hanamora ny fampiasana ireo fitaovana "tactile"
Tablet PC 7'' .Tsara kalitao. Bluetooth, Wifi, GPS, Webcam 1, Multi Touch,azo akana sary, azo iantsoana finday Loko: fotsy
Kilé USB azon'ny rehetra ampiasaina, hitehirizana ireo asa, hira. Afaka mihodina ny sarony.Fitehirizany: 16GoVita Kingston Data traveler
Mbola vaovao eto Madagasikara. Ho an'ny mpitondra moto. Solomaso mandrakitra an-tsary ny lalana aleha, amin'ny kalitao video ambony. Azo hanaovana horonantsary. OV5653 capteur CMOS Full HD 1080p [Referansa]
Sera Wifi ifampifandraisana solosaina tsy misy fil amin'ny alalan'ny DAP sns...Azo ampifandraisina amin'ny wifi hafa.
Finday hafakely. Miendrika brike misy sary pepsi.Afaka akana sary ary tsy mila mihetsika betsaka. Ety ambony no misy ny camera ka afaka avy hatrany maka ny sary amin'ny fomba tsy manahirana.Marika G-Vill tech.
69 900 Ar